Raha ny tena izy, toa tsy misy intsony na ny tsara na ny ratsy, ho an’ny ankamaroan’ny olona. Inona àry no ao ambadik’izany fandavana ankitsirano izay rehetra mety ho fitsipika moraly izany? Tsy misy afa-tsy ny fiavonavonana sy ny fitiavantena, izany hoe ny filàn’ny fon’ny olona mihitsy no niova hatramin’ilay fotoana nidiran’ny ota teo amin’izao tontolo izao. “Koa izany dia tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran’ny fahafatesana” (Romana 5:12). Ny “IZAHO” irery sisa no manjaka ao amin’ny olona: ny hampivelatra ny maha olona, ny hiezaka hiala amin’izay sakantsakana mba hifalifaliana amin’izao fiainana izao! Miafara amin’ny fifandonana mahatsiravina sy hatraiza hatraiza eo amin’ireo “mpizahozaho” rehetra ny fanandratana hatrany ity “IZAHO” ity, ao anatin’ny herisetra sy ny fahavetavetana.
I Jesoa Kristy no modely tonga lafatra indrindra amin’ny fanehoana ity fitiavana marina ity. Ny ainy mihitsy no natolony ho an’ireo mpanota: “Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika” (1 Jaona 3:16). Efa hitantsika ao amin’Andriamanitra ihany koa izany: tia izao tontolo izao Izy ka “nanolotra ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jaona 3:16).
“Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany” (Salamo 32:1)
“Mainka sambatra aza ny mihaino ny Tenin’Andriamanitra ka mitandrina izany” (Lioka 11:28).